Mbola manjakazaka hatrany ny Keniana eo amin’ny taranja hazakazaka lavitr’ezaka maneran-tany · Global Voices teny Malagasy
Mbola manjakazaka hatrany ny Keniana eo amin'ny taranja hazakazaka lavitr'ezaka maneran-tany
Voadika ny 27 Avrily 2011 8:48 GMT
Manjakazaka eran-tany hatrany ireo mpihazakazaka Keniana hatramin'izao. Ny mahazatra dia manjaka any amin'ireo fifaninanana Eoropeana sy Amerikana ry zareo kanefa tamin'ity taona ity dia niavaka kely izany satria nandresy tamin'ny fifaninanana goavana ry zareo na ny lahy izany na ny vavy.
Bilaogera vahiny tao amin'ny Outside Blog nitantara:
Raha vao nahavita ny antsasa-dalana tao anatin'ny 1:01:58 ny lehilahy voalohany tamin'ny hazakazaka andiany faha 115 tany Boston, dia nahafantatra ny rehetra fa mandeha mafy be ireto mpihazakazaka ireto. Kanefa ny fotoana tsara indrindra 02:03:02 vitan'ilay Keniana Geoffrey Mutai izay tsy mbola nisy naharesy mihitsy dia nampitolagaga ny rehetra satria sarotra sy be fiakarana ny lalana nanaovana ny hazakazaka tao Boston.
Nanampy an'i Mutai ny fihazakazahany irery :
Mutai, izay mbola tsy misy ifandraisany amin'ilay tompon-daka tany Londres Emmanuel Mutai, no nilaza fa nanomana fatratra io hazakazaka tany Boston io tamin'ny alalan'ny fanaovany fanazarantena tany amin'ny faritra be tendrombohitra tany an-tanindrazany any Kenia. Nihazakazaka irery foana i Mutai saika nandritra ny fifaninanana rehetra niaraka tamin'i Moses Mosop, ary nilaza izy fa vao maika mampandeha mafy azy ny fihazakazahany irery. “Rehefa irery aho dia haiko ny mandanjalanja ny fandehako, fa rehefa misy olona tamy manantona ahy dia tsy haiko ny fandehako”, hoy izy taorian'ny fifaninanana.
Ny bilaogyThe Running Deo mampifandray amin'ny tantara nivoaka tao amin'ny tranonkalan'ny AIFF izay nahitana an'i Mutai nidera an'ilay Amerikana Ryan Hall noho ity farany manana fandeha haingana:
Farafahakeliny, ny olona iray dia tokony hahavita 2:55 isaky ny kilometatra (4:42 isaky ny maily), mandritra ny hazakazaka rehetra misy halavirana 42,195Km (26 maily, 385 hakiho) ary mety hahavita tsaratsara noho izay aza.
“Nanosika anay izy,” milaza ny rivotra eto i Mutai. “Kanefa tsy dia rivotra be akory izany.”
Ankoatra izay, nidera manokana an'ilay Amerikana Hally i Mutai noho ny hafainganam-pandehany androany. Hall, izay tompon-daka eo amin'ny hazakazaka 21Km no nitarika nandritra ny kilometatra maromaro tany amboalohany ary nanafaingana ny fandehany hatrany isaky ny mihamora ny hazakazaka teo amin'ny fiakarana tao Hopkonton hatrany Boston. Nitarika teo amin'ny 5Km i Hall tao anatin'ny 14:17, avy eo 10Km tao anatin'ny 29:05. Nandritra izany fotoana rehetra izany dia efa very iray minitra sy sasany 30:08 10-K rehefa nisaraka tamin'ilay nitarika ny hazakazaka i Rober Kiprono Cheruiyot, tompon-daka teo aloha.
Andro iray mialoha ny nahazoan’ ny Keniana anankiroa fandresena mitovy ka nahavitany ny hazakazaka tao anatin'ny fotoana tsara indrindra teo amin'ny lehilahy ary fotoana tsara indrindra koa teo amin'ny vehivavy nandritra ny fifaninanana tany Londres:
Nanao poa-droa i Kenia noho i Emmanuel Mutai rehefa nandresy tamin'ny hazakazaka Virgin London Marathon sady nahavita izany tao anatin'ny fotoana tsara indrindra vaovao indray.
Tao alohany, ilay mpiray tanindrazana aminy Mary Keitany nanao izay faraheriny nampisehoana fa izy no mpanjaka eo amin'ny hazakazaka vehivavy…. Nitsoaka izy nanomboka teo amin'ny nahavitany 15 maily ary tsy azo intsony ka nandresy tamin'ny fotoana 2 ora 19 minitra 17 segondra, nahazo tombony 10 minitra raha oharina tamin'ny zava-bitany tany New York tamin'ny taon-dasa.
Ity tovovavy 29 taona ity nanomboka ny taona tamin'ny famontsanana ny zava-bita tsara indrindra teo amin'ny halavirana 21Km tao anatin'ny 1:05:50, izay nahatonga azy ho vehivavy voalohany haingam-pandeha indrindra satria nahavita nihazakazaka ambanin'ny 66 minitra.
Caroline Kilel completes another double for Kenya at the 2011 Boston Marathon – Image courtesy of www.runblogrun.com
Tamin'ny herinandro lasa, nisy zavatra nahamenatra nataon'ny mpikarakara hazakazaka tao an-tanànan'i Utrecht tany Pays-Bas satria natao latsaka 100 heny amin'ny vola tokony ho azon'ny mpihazakazaka teratany ny vola azon'ny Keniana satria “mandresy foana ny Keniana”:
Nisy zavatra tsy mazava loatra nataon'ny mpikarakara ny hazakazaka lavitr'ezaka tany Utrecht tany Pays-Bas ka nahakivy ny mpihazakazaka Keniana tsy handray anjara – ary handresy – ny hazakazaka 42Km fanao isan-taona. Nataon'ny mpikarakara latsaka 100 heny amin'ny vola tokony ho azon'ny mpihazakazaka teratany tonga eo amin'ny faritra fahatongavana ny vola azon'ny atleta Keniana, izay niteraka resabe sy fanakianana avy any amin'ny mponina sasany any Pays-Bas, tany amin'ny media sy ireo miady amin'ny fitoviana.
Noho izany, nanome baiko ny Athletics Kenya ho an'ireo atleta Keniana rehetra nahazo fanasana handray anjara amin'ity hazakazaka ity izay hatao amin'ny 25 aprily hanaisotra ny fandraisany anjara.
Hita tao amin'ny BookerRising.net koa ny zavatra hafahafa nokononina mandritra ity hazakazaka ao an-tanàna any Pays-Bas ity, nomena lohateny hoe: “Hazakazaka lavitr'ezaka aty Pays-Bas: Mainty hoditra manosy ny mpihazakazaka fotsy hoditra, sady manakivy ny mitovy aminy. Antsika ny hetsika ka tohanantsika ireo atletantsika tsy manan-talenta ireo”:
Jereo amin'ny lafiny tsara eo amin'ny fanatanjahantena ny tantara. Keniana 23 sy Etiopiana iray no nandresy tato anatin'ny hazakazaka 24 nokarakaraina tato anatin'ny 5 taona. Tsy ampiako indray fa vao tamin'ny faran'ny herinandro teo. Keniana no nandresy tamin'ny hazakazaka natao tany Rotterdam any Pays-Bas ihany. nampiditra fijery vaovao: ny vahiny (raha adika: Afrika mainty) mandresy amin'ny hazakazaka ao Utrecht amin'ny 25 aprily – izay, azoko ambara fa anisan'ny mitana ny sain'izao tontolo izao – no tsy hahazo loka afa-tsy 100 Euros raha tokony hahazo 10 000 Euros (14 400 dôlara amerikana) azon'ny mpihazakazaka avy any Pays-Bas ihany no nasaina amin'ity (nomena anarana hoe “Mpiady avy any Pays-Bas”). Ny tanjona dia hanakiviana ireo mpihazakazaka afrikana mainty hoditra tsy handray anjara intsony (amin'izay tsy handresy intsony) mandritra ny hazakazaka rehetra hatao any Pays-Bas.
Farany, Dave Solomon manontany ny fanapahan-kevitry ny IAFF tsy hanaiky ny fandresen'ilay Keniana Geoffrey Mutai izay nahavita ny zava-bita tsara indrindra tao anatin'ny 2:03:02 nandritra ny fifaninanana hazakazaka maneran-tany satria natosiky ny rivotra izy:
Ny fanapahan-kevitra noraisin'ny IAAF tsy hanaiky ny fandresen'ilay Keniana Geoffrey Mutai mahavita ny fotoana tsara indrindra (2:03:02) tamin'ny alatsinainy teo nandritra ny hazakazaka tany Boston no fanapahan-kevitra tokana azo kianina hatramin'izay hitako raha eo amin'ny resaka fanatanjahan-tena no jerena. Hoy ianao hoe nilaza ny IAAF nandritra ny 115 taona izao fa mora ny nampanarahan-dalana ny hazakazaka be mpankafy indrindra eto ambonin'ny tany? Ary tsy azo atosiky ny rivotra koa ve raha te ho ara-dalàna?
Tsy mbola nisy naheno azy ireo niteny ny momba izany talohan'ny alatsinainy?
Tsy fantatra ny antony, nolavin'ny IAAF fotsiny izao ny zava-bita tsara indrindra teo amin'ny hazakazaka 26 maily tamin'ny fifaninanana iraisam-pirenena. Angamba hampanaoviny indray i Fanuel Hall amin'ny herintaona hanatratra io zava-bita tsara indrindra io.